ဖုန်းက အပြင်သွားရင် မပါမဖြစ်ပါပဲ လို့ ပြောတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဝင့်ယမုံလှိုင် – DigitalTimes
အချစ်သင်္ကေတဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးနဲ့ ပရိတ်သက်တွေအသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရတဲ့သူ အခုဆိုရင်လည်း MRTV 4မှာသူမရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေး ချစ်သူထွင်းတဲ့အက္ခရာ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်း တွဲလေးလည်း လာနေ ပါတယ်။ အဲဒီ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးဟာ သူမအတွက် ၇ ခုမြောက် ဇာတ်လမ်း တွဲလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ သူမကတော့ သရုပ်ဆောင် ဝင့်ယမုံလှိုင် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမနဲ့တွေ့ တုန်း ပြောခဲ့သမျှတွေကို
Q. လက်တလော အနုပညာလှုပ်ရှားမှုကို ပြောပြပေးပါလား။
တရုတ်ပြည်သွားပြီး YBS ကားလမ်းကြောင်းအတွက် ကားအသစ် အစီအစဉ်
တွေအတွက် ကော်မာရှယ်လေး ရိုက်ထားပါတယ်။ နောက်ထပ် MTV နဲ့ကြော်ငြာလည်း ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။
Q. အခု MRTV4မှာ ချစ်သူထွင်းတဲ့အက္ခရာ ဆိုတဲ့ ညီမလေးရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေလေး လာနေတယ်နော် အဲဒါ ညီမလေးရဲ့ ဘယ်နှခုမြောက်ဇာတ်လမ်းတွဲလဲ။
အချစ်သင်္ကေတ ဇာတ်လမ်းတွဲကို အစီစဉ် (၄)အထိရိုက်ခဲ့တယ်။ နောက်တစ်ခုက Happy Beach လည်း ယမုံရိုက်ခဲ့တယ်။ အခြား Mini series တွေလည်း ရိုက်ခဲ့တယ်။ (၈) ခုမြောက်လား ။ (၇) ခု မြောက်လား …မသိဘူး။ အဲလောက်တော့ ပြောလို့ရတယ်။
Q. နာက်ထပ်ရော ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ရိုက်ဖို့ရှိသေးလား။
လောလောဆယ်တော့ မရှိသေးဘူး။ ရိုက်ပြီး မလွှင့်ရသေးတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုတော့ ရှိသေးတယ်။ အဲဒါက ဇာတ်လမ်းတွဲအရှည်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Mini series လေးပါ။ ပညာပေးအိမ် ထောင်ရေး ဇာတ်လေးပါ။
Q. ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရိုက်ရတာနဲ့ ဗီဒီယိုတွေရုပ်ရှင်တွေ ရိုက်ရတာ ဘယ်လိုကွာခြားမှုရှိလဲ။
ယမုံ အမြဲတမ်းကြုံရတဲ့အရာက အချိန်ပေါ့နော်။ ဇာတ်လမ်းတွဲက အချိန်ပေးရတာ များတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုကို (၉) လ (၁၀) လလောက် အချိန်ပေးရတယ်။ နယ်တွေလည်း ထွက်ရတယ်။ အဲဒီ အခြားအပြင်အလုပ်တွေနဲ့ ညှိတာတွေ ရှိတယ်။
Q. ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခု ရိုက်တော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုတွေ ကြိုတင် ပြင်ဆင် လဲ။
အဓိကကတော့ ကိုယ်လုပ်ရမယ့် ကာရိုက်တာ သေချာသွားပြီဆိုရင် ဇာတ်ညွှန်းကို ထပ်ခါထပ်ခါဖတ် ရတယ်။ ပြီး ကိုယ်ကာရိုက်တာနဲ့ လိုက်တဲ့ အဝတ်အစား အသုံးအဆောင်တွေ က အစ စီစဉ်ရတယ်။ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အဆက်မပြတ်သွားအောင်လည်း စီစဉ်ရတယ်။
Q. MRTV4နဲ့ စာချုပ်က ဘယ်လောက်ရှိသေးလဲ။
စာချုပ်ကတော့ ရှိပါသေးတယ်။ ရှိတယ် ဆိုပေမယ့် အပြင်အလုပ်တွေလည်း လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။
Q. ညီမလေးကာရိုက်တာတွေက အမာဘက်ကို သွားတာ များတယ်နော်။
ယမုံ အဲဒီကာရိုက်တာတွေအတွက် အရမ်းလည်း စိတ်ပူမိတယ်။ အမြဲတမ်း ခက်ထန်ပြီး မာကြောတဲ့ ကာရိုက်တာကြောင့် ပရိတ်သက်တွေ မုန်းသွားမှာကို စိုးရိမ်မိတယ်။အခုကားက ပိုတောင် ခက်ထန်တာ မြင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ပရိတ်သက်တွေက အားပေးတဲ့အတွက် ပျော်ပါတယ်။ တချို့ပရိတ်တွေကလည်း ဝေဖန်ပေးကြတယ်။ တချို့ကလည်း ဒီဇာတ်ရုပ်ကြီးပဲ မဟုတ်ပဲ ဇာတ်ရုပ်ပြောင်းဖို့ ပြောကြတယ်။
အခု iphone7plus ကိုင်ထားပါတယ်။
Q. ဖုန်းကို ကိုယ်ရဲ့တစ်နေ့တာအတွက် ဘယ်လိုအသုံးပြုဖြစ်လဲ။
ဖုန်းနဲ့ပဲ ကိုယ်ရဲ့အလုပ်တွေ ဆက်သွယ်တယ်။ Social Network သုံးတယ်။ ဖုန်းက အပြင်သွားရင် မပါမဖြစ် ပစ္စည်းတစ်ခုပါပဲ။ ဖုန်းပျောက်သွားခဲ့ရင် မနေတတ်လောက်အောင်ပါပဲ။
Q. ဖုန်းထဲမှာဘယ်လို app တွေကိုသုံးဖြစ်လဲ။
Social Network App တွေသုံးတာများတယ်၊
Q. ဖုန်းကလူတစ်ယောက်အတွက် ဘယ်လောက်အသုံးဝင်တယ်လိုထင်လဲ။
ဖုန်းက လူတိုင်းအတွက် အရမ်းကို အသုံးဝင်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လူတစ်ဦးချင်း ဆက်သွယ်တာရော နေရာတစ်ခုသွားမယ်ဆို သူရှိပါ့မလား။ ဆိုင်တစ်ဆိုင် သွားမယ် ဆိုလည်း ဖွင့်လား မဖွင့်လားဆိုတာ ဖုန်းလေးတစ်ချက်ဆက် လိုက်တာနဲ့သိရတယ်။ ဖုန်းကလူတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ် လို့
Q. ဖုန်းကိုရော ခဏခဏလဲကိုင် ဖြစ်လား။
အမြဲတော့လဲ မကိုင်နိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ အချိန်မှာ ဖုန်းကလည်း အသစ်ထွက်တဲ့ အချိန်ဆိုရင်တော့လည်း လဲ ကိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
စာသင်ချိန်မှာ စိတ်မဝင်စားတဲ့ ကျောင်းသားများကို မျက်နှာ အာရုံခံ နည်းပညာဖြင့် စစ်ဆေးမယ့် ကျောင်း